Sidee "Blockchain" nooga dhigi kartaa mid xor ah? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee "Blockchain" nooga dhigi kartaa mid xor ah?
Luigys toro | | Aplicaciones, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
In Internetku yahay qayb aasaasi u ah horumarka ilbaxnimada aadanaha waa iska cadahay, hase yeeshe dadka caadiga ah ma sahlana in la fahmo ama laga feejignaado waxa uu kacaankani ula jeeday nolosheena.
Asalkeeda "shabakada" waxaa la kashifay iyadoo ah fursad baahinta macluumaadkaSi kale haddii loo dhigo, qof kasta oo meeraha ku jira oo marin u leh internetka wuxuu ku gaari karaa macluumaad gaar ah dhowr guji oo jiir ah. Tan ka sokow, wuxuu yiri shaqsiyan wuu ku kicin karaa macluumaadkaas inta jeer ee uu doono. Tan waxaa loogu yeeray Internetka ee macluumaadka.
Internet-kan macluumaadka ayaa u muuqday mid bixinaya a xorriyadda ka sii weyn dadka adduunka oo dhan, priori, fikrad weyn oo qumman. Si kastaba ha noqotee, dabeecaddeeda gaarka ah ayaa mas'uul ka ahayd badhitaanka dheefahaas loo abuuray. Qeexitaankiisa, internetka waa shabakad kumbuyuutar caalami ah oo loogu talagalay gudbinta macluumaadka. Xaqiiqda ah inay ku saleysan tahay taageerada kumbuyuutarka ayaa nagu qasbeysa inaan heysano nidaamyo taxane ah oo ku qoran koodh u oggolaanaya shaqadiisa. Sidoo kale, haddii ujeeddadaadu tahay gudbinta macluumaadka, waxaan u baahanahay taxane bixiyeyaal ah macluumaadkaas si ay u jiraan, waana halka ay ku taal fikradda xorriyadda iyo baahinta xukunka oo hoos u dhacday.
Xeerarkii hab maamuuska kor lagu soo sheegay lagu been abuurtay may ahayn il furan, taas oo ah, isticmaale aan kala sooc lahayn maheli karo koodhka la sheegay oo wax ka badali kara si loo gaadho hawlo gaar ah oo ku habboon baahidooda, haddii aanu haysan, welina haysan, in u hoggaansamaan xeerarka ay ku siinayaan saddex ama afar shirkadood oo waaweyn. Si kale haddii loo dhigo, waa inuu ciyaaro ciyaarta ay u ogolaadeen inuu ciyaaro, sidaas darteedna meesha looga saaro qayb weyn oo ka mid ah xorriyaddaas muddada dheer la sugayay.
Dhinaca kale, hal abuureyaasha nuxurku waxaa sidoo kale qabta baahida loo qabo inay adeegsadaan aaladaha ay ku mideysan yihiin dalalkan kala duwan si ay u soo bandhigaan shaqadooda, aqbalida shuruudaha iyo kharashyada inay soo rogaan.
Sidaa darteed, xaaladda la soo maray 25-kii sano ee la soo dhaafay waa tii maamul baahinta beenta ah, maaddaama dhab ahaantii wax walba ay ku wareegaan algorithms-ka ay abuureen dad yar. Haddii tan aan ku dareyno qarsoodi la'aanta, aasaaska aasaasiga ah ee xorriyadda, asal ahaan waa wax aan macquul aheyn iyadoo la adeegsanayo borotokoollada hadda jira, waxaan ku soo gabagabeyneynaa in Internetku uusan si fiican u qaban shaqada oo markii hore loogu talagalay.
Markaan la kulanno xaaladdan hay'ad, waxaan u tixraaceynaa sidan oo kale maxaa yeelay haybtiisa lama yaqaan ama aqoonsi dhab ah, oo loo yaqaan Satoshi Nakamoto wuxuu go'aansaday inuu abuuro dhammaadka tobanka sano ee ugu horreeya millennium-ka nidaamka Seeraar, shabakad "fac-to-peer" ah (shabakad udhaxeysa facooda) oo la oggol yahay isticmaalka isha furan in noodhadh taxane ah (kombuyuutarro kuxiran shabakad) ay wadaagaan macluumaadka iyaga dhexdooda iyada oo aan la helin noole xukuma macaamillada la yiri, taasi waa, baahinta. Sidoo kale, macluumaadkaas la wadaago waxaa lagu keydin doonaa baloogyo isku xiran oo ay ku xiran tahay shaqada algorithmic. Blockchain wuxuu dhashay.
Dhinacyada farsamada ee ku saabsanblockchainWaxaan bixin lahaa dhowr qodob sidaa darteed waxaan diirada saari doonaa waxa ay noo keeni karto tikniyoolajiyaddan.
Marka ugu horeysa, waa in la ogaadaa inay tahay tikniyoolajiyad ku saleysan il furan Qof kastaa wuu qaadan karaa lambar hore loo qoray oo uu wax uga beddeli karaa ama u ballaarin karaa sida uu doono, sidaas awgeed helitaanka codsi cusub oo gebi ahaanba ka duwan kii hore. Tan, waxa lagu gaadhay ayaa ah in ka shaqaynta macluumaadka ay ka miisaan culus tahay taageerada ay ku qoran tahay, waa waxa aan ugu yeedhno Internetka Qiimaha.
Internetkaan Qiimaha leh wuu ka duwan yahay Internetka Macluumaadka inta badan intaas ayaa sheegay in macluumaadka aan la beddeli karinTaasi waa, marka lagu daro xannibaadda, lama koobiyeyn karo ama wax laga beddeli karo qof walbana wuu heli karaa iyada oo aan la kormeerin jirka dhexe. Nidaam baahin dhab ah. Tan waa in lagu daraa cinwaanada loo isticmaalay gudbinta macluumaadka waa la xareeyay, iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga adeegsadaha ay wax ku ool tahay.
Dhammaan dhinacyadan wanaagsan ayaa sababay in bilihii la soo dhaafay tiro aan badnayn oo dhufto iyo shirkado ah ay bilaabeen inay ku dhisaan wax soo saarkooda iyagoo ilaalinaya xannibaadda, kuwa ka go'an inay bixiyaan taageero maadooyinka internetka ee kala duwan xitaa kuwa ogolaada fuliyaan macaamil bangi. Sidan oo kale, waxaan ka filan karnaa in mustaqbalka fog waxqabad kasta oo aan hadda ka qabanno kumbuyuutarkeennu uu ku saleysnaan doono nidaamkan oo lagu fulin doono adeegsiga adeegsiga silsiladda xannibaadda u ah taageero, sidaas darteed ilaalinayna magacyadeenna, baabi'inta dhexdhexaadiyeyaasha iyo iyadoo la hubinayo in hawlgalkeennu uu dhammaan aqoonsan doono maaddaama Blockchain uu ku saleysan yahay kalsoonida la kala dhex dhigay lammaanaha aan is aqoon.
Wali waa teknoolojiyad aan la soo koobi karin oo u baahan geeddi-socod bislaansho, laakiin mustaqbalka adiga ayaa iska leh, illaa aan annaga oo aadanuhu baab'inno mooyee, sida aan ku sameyno dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee aan helno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee "Blockchain" nooga dhigi kartaa mid xor ah?
fiiri maqaalkan aan qoray!
Waa kan ugu macquulsan ee loo yaqaan 'cryptocurrency' tan macdanta tan iyo markii BOINC ay si aad ah ugu shaqeyneyso asalka, oo ka duwan kuwa kale sida Monero oo gebi ahaanba (iyo, ula kac ah) u burburiya kaydka L3 taas oo saameyn ku yeelanaysa xitaa kombuyuutarrada xoogga leh oo aad u ballaaran.
Waxaan ilaaway maqaalka, haha.
guul soto dijo
iyo waxaas oo dhan bangiyada waaweyni waligood ma aqbali doonaan cryptocurrencies, »xakamaynta lumin laakiin sidee?»
Ku jawaab ku guuleysta soto
Maqaal aad u wanaagsan, adigoon ilaawin khataraha aqoonsi la'aanta.
Xaqiiqda ah inay tahay mid qarsoodi ah oo qarsoodi ah ayaa na siinaysa dareenka amniga. Butooo, waxaa loo isticmaali karaa ujeedooyin kala duwan.
Fikradayda ku saabsan Muuqaalka iyo dareenka Libreoffice II